Goorma La Baadhi Doono, La Baadhiyo, Oo La Diidayo Dib-u-Xiriirinta Dib-u-Celinta Si Loo Wanaajiyo Darajooyinka Raadinta | Martech Zone
Goorta La Baadhinayo, La Baadhi Doono, Oo La Diidayo Dib-u-Xiriirinta Dib-u-Eegista Si loo Wanaajiyo Qiimaynta Goobidda
Talaado, Nofeembar 2, 2021 Talaado, Nofeembar 2, 2021 Douglas Karr
Waxaan u shaqaynayay laba macmiil oo jooga laba gobol oo qabta adeega guriga oo isku mid ah. Macmiil A waa ganacsi la aasaasay oo ku dhawaad ​​40 sano oo waayo-aragnimo ah u leh gobolkooda. Macmiil B waa ka cusub oo leh ilaa 20 sano oo waayo-aragnimo ah. Waxaan dhamaystirnay hirgelinta goob cusub kadib markii aan sahan u samaynay mid kasta oo ka mid ah macaamiisheeda kuwaas oo helay xeelado wax barasho organic dhibaya oo ka imanaya hay'adahooda:
Reviews - Hay'aduhu waxay daabaceen boqolaal bog oo gaar ah oo leh hal dib-u-eegis mid kasta oo ka kooban waxyaabo yar oo ka baxsan adeegga iyo jumlado yar oo dib u eegis ah. Waxay ahayd wax iska cad in hadafkoodu halkan ahaa inay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan ​​ereyada muhiimka ah ee juqraafiga iyo adeegga la bixiyo.
Bogagga Gobolka - Wakaaladu waxay daabacday daraasiin bogag gudaha ah oo ku celceliyay nuxurka adeegga guriga ee la bixiyay laakiin waxay qeexeen magaalo ama degmo ka duwan magaca iyo jirka. Hadafka halkan wuxuu ahaa isku mid… in la isku dayo in laga faa'iidaysto ereyada muhiimka ah ee juqraafiga iyo adeegga la bixiyo.
Ma dhahayo tani waa xeelad taas kari waayey in la isticmaalo, waxa ay ahayd uun dhaqan-gelin cad oo caajis ah oo ka kooban nuxurka bartilmaameedka u ah gobolka iyo adeegga. Anigu taageere uma ihi istaraatiijiyadan gabi ahaanba, waxaan helnay guul cajiib ah marka aan si fudud u qeexno aagagga adeegga ee lugta, oo ay ku jiraan ciwaanka goobta (yada) goobta ganacsiga ee cagaha, oo ay ku jiraan lambarka taleefanka (oo leh aagga maxalliga ah code), ka dibna daabacaadda macluumaadka adag ee jidhka bogga ku saabsan adeegga.
Dhab ahaantii ma jirto sabab sababta bogga saqafka, tusaale ahaan, loogu darajo wanaagsanayn "Qandaraaslaha Saqafka" dhammaan gobollada uu qandaraasluhu ka shaqeeyo. Waxaan doorbidi lahaa inaan ka shaqeeyo hagaajinta iyo hagaajinta hal bog oo saqafka ah intii aan lahaan lahaa u samee oo ula soco bogag badan macmiilka.
Waxaa ugu sii darnaa, labadan macaamiil dhab ahaantii ma helin wax hoggaan ah iyaga oo u maraaya boggooda oo darajooyinkoodu hoos uma dhicin muddo sannad ka badan. Sidoo kale, wakaaladooda ayaa lahaan jiray goobta(yada) iyo hal wakaalad xataa lahaansho domain reis-sheegid. Markaa...dhammaan lacagtii ay maalgashanayeen uma aysan soo dhawaynin inay dhab ahaantii kobciyaan ganacsigooda. Waxay go'aansadeen inay shirkayda siiyaan tallaal ay ku hawlgelinayaan xeelad cusub.
Labada macmiilba, waanu ka shaqaynay wanaajinta goobahooda maxaliga ah muuqalka iyadoo la dhisayo goob cusub oo la hagaajiyay, qaadashada drone-ka iyo kahor/kadib sawirada shaqadooda dhabta ah halkii ay ka ahaan lahaayeen sawir qaadis, dib u eegis ayaa bilaabay olole qabashada, ka soocday iyaga tartamayaashooda, si sax ah u jiheeyay kumanaan xiriiriye gudaha ah boggaga ku habboon, waxaana la sameeyay ka shaqaynta fidinta gaadhitaankooda YouTube, bulshada, hagaha, iyo hagayaasha qandaraaslayaasha wax soo saarayaasha.
Goorma La Samayn Lahaa Xisaabinta Dhabarka
Waxii ku xigay ee dhacay ayaa sheegay:
Macmiilka A - kuwaas oo aan ka shaqaynay intii ugu dheerayd, ma hagaajinayn muuqaalkooda mashiinka raadinta ee ka baxsan ereyada muhiimka ah. Waxaan sii wadnay hagaajinta boggaga, dib looga xidhay YouTube, cusbooneysiiyay in ka badan 70 hageyaal… oo wali wax dhaqdhaqaaq ah ma jiro. Furaha ayaa arkayay ereyada muhiimka ah ee aan summada lahayn weligaa kor uma dhaqaaqin… dhammaan waxay ku duugan yihiin bogga 5 ama ka sii qoto dheer.
Macmiilka B - usbuuc gudihii markii la daabacay boggooda waxay sheegeen inay helayaan hoggaan wanaagsan, iyo darajooyinkooda ayaa kor u kacay aan calaamadeyn ereyada furaha ah
Ka dib markii aan baarnay tartankooda iyo wanaajinta boggooda toddobaadyo, waxay ahayd inaan si qoto dheer u baarno sababta Macmiilka A ma dhaqaaqin. Sababtoo ah xeeladaha la isweydiin karo ee horay loo geeyay, waxaan rabnay inaan eegno tayada backlinks ee boggooda. Waxay ahayd waqtigii la samayn lahaa a backlink xisaabinta!
Hantidhawrka dib-u-xirnaanta dhabarku waxa uu tilmaamayaa dhammaan xidhiidhada boggooda ama bogaggooda gudaha iyo falanqaynta tayada goobaha uu ka jiro xidhiidhinta dambe. Xisaabinta Backlink waxay u baahan tahay cid saddexaad Qalabka SEO… oo aan isticmaalo Xeebaha. Xisaabintaan, waxaad ku aqoonsan kartaa xiriiriyeyaasha ka yimid goobo tayo sare leh iyo sidoo kale dib-u-xireyaasha xun (sidoo kale loo yaqaan sun) waa inaad ka saartaa ama ogeysiisaa Google.
Waa maxay Backlinks xun?
Halkan waxaa ah muuqaal guud oo muuqaal ah oo ku saabsan backlinks iyo waxa ay yihiin xiriirka xun, sida ay u isticmaalaan dadka isticmaala blackhat SEO, iyo sidoo kale sababta ay u jebiyaan shuruudaha Google oo ay tahay in laga fogaado kharash kasta.
Dib-u-eegisyada Dhabarka iyo Dib-u-celinta Dib-u-celinta
Isticmaalka XeebahaHantidhawrka backlink, waxaan awoodnay inaan si cad u eegno boggaga iyo boggaga tixraacay boggooda:
Fadlan maskaxda ku hay in qalabyada sida Xeebaha waa cajiib laakiin ma falanqayn karaan xaalad kasta macmiil kasta. Waxaa jira farqi aad u weyn, xisaab ahaan, oo u dhexeeya ganacsi yar oo maxalli ah iyo adeeg caalami ah ama luqado badan oo khadka ah. Qalabkani waxay u muuqdaan inay si siman ula dhaqmaan labadaba taas oo aan aaminsanahay inay tahay xaddidaad daran. Xaaladdan macmiilka:
Wadarta Hoose – Iyadoo warbixintani ay leedahay, kaamil ah, anigu kuma raacsani. Goobtani waxay leedahay tiro yar oo ah wadarta dib-u-celinta sidaa daraadeed haysashada hal dhaban oo sun ah backlinks - fikradayda - waxay ahayd dhibaato.
Tayada - Iyadoo hal xiriir oo kaliya loo kala saaray sun ah, Waxaan helay dhowr xiriir oo kale oo ahaa tuhmaayo gudaha hanti dhawrka laakiin waxa lagu calaamadeeyay meel ka hoosaysa heerka sunta ah sida ammaan. Waxay ku jireen bogag aan la akhriyi karin, oo ku yaal domains aan macno samaynayn, oo aan keenin taraafikada goobta.
Waa maxay Diidmo?
Google wuxuu bixiyaa hab lagu ogeysiiyo marka ay kuwan xiriirka xun ay jiraan, habka loo yaqaan a diidid. Waxaad soo gelin kartaa fayl qoraal fudud oo taxaya xayndaabyada ama URL-yada aad rabto inaad ka diido tusmada Google marka aad go'aaminayso sida boggaagu u kala sarreeyo.
Diid - Waxaan akhriyay maqaallo dhowr ah oo online ah halkaas oo xirfadlayaasha SEO ay u isticmaalaan qalabyada diidmada si ay si xor ah ugu sheegaan meelo badan iyo bogag Google ah. Waxaan ahay wax yar oo muxaafid ah oo ku saabsan habkayga… falanqaynta xiriir kasta oo tayada goobta, taraafikada tixraaca, darajadeeda guud, iwm. Waxaan hubiyaa in backlinks wanaagsan keligood looga tagay oo kaliya su'aal iyo xiriiryo sun ah ayaa la diiday. Caadi ahaan waxaan door bidaa dhanka diidmada domain dhan marka loo eego bogga sidoo kale.
Halkii aad isticmaali lahayd aaladda diidmada Google, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad la xiriirto milkiilaha goobta tixraaca si aad meesha uga saarto isku xirka… laakiin kuwan spammy, bogagga sunta ah, waxaan inta badan ogaaday inaysan jirin wax jawaab ah ama macluumaad laxiriira gabi ahaanba.
Qalabka laga heli karo Semrush runtii si wanaagsan ayaa looga fikiray si loo ilaaliyo goobtaada ama macaamiishaada profiles backlinks. Qaar ka mid ah sifooyinka qalabku wuxuu bixiyaa:
Guudmarka - warbixinta aad kor ku aragto.
Baaritaanka - Liis dhamaystiran oo ah dib-u-xirid kasta oo laga helo goobtaada, waa sunta, bogga loo socdo, qoraalka barroosinka, iyo sidoo kale ficillada aad qaadi karto, sida liis gareynta ama ku darista domainka ama bogga faylka qoraalka diidmada.
Diid - kartida aad u geli karto faylkaaga diidmada ee hadda goobta ama soo dejiso fayl cusub oo diidmo ah si loogu geliyo Google Search Console.
Socodka - oo leh isdhexgalka Google Search Console iyo Google Analytics, diidmadaada hadda waxaa lagala socon karaa gudahaaga Xeebaha mashruuc si loo arko saamaynta ay ku yeelatay.
Halkan waxaa ah sawirka sawirka backlink xisaabinta … Waxaan ku qasbanaatay in aan xogta macmiilka ka saaro bogga, bartilmaameedka, iyo qoraalka barroosinka maadaama aanan rabin in aan ku tartamo cidda aan ka shaqaynayo.
Faylka qoraalka diidmada ah ee Semrush kuu dhisay oo uu kuu hayo waa kaamil, oo lagu magacaabay taariikhda oo uu ku daray faallooyinka faylka:
Tallaabada xigta waa in la soo geliyo faylka. Haddii aadan ka heli karin Google's Disavow Tool console search, halkan waa isku xirka aad geli karto faylkaaga qoraalka Disaw:
Google Search Console Dicaw Linksyada
Ka dib markii aan sugaynay 2-3 toddobaad, waxaan hadda aragnaa dhaqdhaqaaq ereyada muhiimka ah ee aan summada lahayn. Diidmada ayaa shaqaynaysa macmiilkuna hadda waxa uu awoodaa in uu kobciyo muuqaalkooda goobid aan sumad lahayn.
Waligaa Ha Bixin Kharashka Dib-u-celinta
Malahayga ayaa ah in shirkaddii ugu dambaysay ee maamusha goobta macmiilku ay samaynaysay xoogaa dib-u-xirid lacag ah si ay isugu dayaan inay horumariyaan darajadooda guud. Kani waa ganacsi halis ah... waa hab fiican oo lagu eryo macmiilkaaga oo lagu baabi'iyo muuqaalkooda mashiinka raadinta. Had iyo jeer ka codso wakaaladdaada inay shaaciso haddii ay hore u qabanayeen shaqada noocaan ah.
Runtii waxaan u sameeyay hantidhawrka backlink shirkad si guud u socotay oo si wayn u maalgalisay shirkad SEO ah sanado ka hor. Waxa aan awooday in aan si fudud ula socdo xidhiidhyada isku xidhka beeraha waxay dhisayeen si ay u koraan aragtida macaamiishooda. Macmiilkaygu wuxuu isla markiiba ka tanaasulay qandaraaska ka dibna wuxuu iga caawiyay inaan ka shaqeeyo diidmada xiriirka. Haddii tartamayaasha, warbaahinta, ama Google ay aqoonsadaan xiriirkaas, macaamilka ganacsigiisa waa la burburin karaa… macno ahaan.
Sidaan ugu sharxay macmiilkayga… haddii aan dib u raadraaco isku-xirayaasha shirkaddooda SEO qalabyo ay ka mid yihiin Xeebaha. Waxaan hubaa in kumanaanka PhD-yada algorithms-ka dhisa ay sidoo kale awoodaan. Waxa laga yaabaa in ay darajooyin kordheen muddada gaaban gudaheed, laakiin ugu dambayntii waxa lagu qaban doonaa jebinta Shuruudaha Adeegga Google iyo - ugu dambaynta - waxay dhaawacaan summadooda si aan laga soo kabsan karin. Ma aha in la xuso kharashka dheeraadka ah ee ku saabsan in aan hanti-dhawrka sameeyo, the backlink forensics, ka dibna waxay diidaan inay sii sabbeeyaan.
Habka ugu fiican ee lagu helo backlinks waa in kasban iyaga. Ka dhis xog wanagsan dhammaan warbaahinta, la wadaag oo kor u qaad waxa ku jira kanaalada oo dhan, waxaadna kasban doontaa dib-u-xidhidyaal cajiib ah. Waa shaqo adag laakiin ma jirto khatar ku lug leh maalgashiga aad samaynayso.
Isku qor Semrush
Haddi ay kugu adagtahay kala saraynta wakhtiga oo aad u baahantahay xoogaa caawimo ah, waxaanu ka caawinaa dhawr macaamiil dadaalkooda horumarinta mishiinka raadinta. Wax naga weydii la talinta SEO bartayada.
Daah-furka: Waxaan ahay isticmaale awood ah oo ku faana xiriirka Xeebaha waxaanan isticmaalayaa xidhidhkayga xidhiidhinta maqaalkan oo dhan.
Tags: backlink xisaabintabacklink forensicsprofile backlinkdib u xiridbacklinksbacklinks xunxiriiro xundiididraadinta google googlesida loo sameeyo hantidhawrka backlinksida loo baaro backlinksisku xidhka detoxisku xirka forensicslinkrearchtoolsbixisay backlinksayna search enginesemrushSemrush qalab backlinksSEObacklinks sun ah
SellerSmile: Maxay tahay sababta aad uga soo saari karto kooxdaada taageerada ecommerce
Mar 5, 2013 at 1: 46 PM
Waxay u egtahay inaad ogtahay inaan waxan sameynayay caawa. Ma ka nadiifisay dhammaan backlinks laakiin bogga hoyga ee bogga adoo beddelaya URL-yada oo aan 301 iyaga ka dhigin - pupo PITA. Waxay qaadan doontaa bilooyin laakiin taasi waa sababta aan u helo koofiyad madow oo madow.
Waxay noqon doontaa in loo diido bogga guriga
Sep 6, 2013 at 11: 31 AM
Waa hab fudud jaalle. Kaliya gal goobta LinkResearchTools inta hartayna si toos ah ayey u sameyn doonaan. Waxaan aqriyay maqaal ku saabsan Sida looga fogaado Penguin qaababka gacanta. http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
Nov 27, 2013 at 6: 42 AM
Markii aan adeegsaday Link Research iyo Link Detox aad baan uga xumaaday adeegga iyo natiijada. Wax badan ma dhicin, oo la iima siin caawimaad badan markaan u baahdo. Waxaan go aansaday in aan isticmaalo Auditors-ka Link-ka si aan u kala shaandheeyo gadaashayda gadaal ka dib markaan arkay dib u eegis aad u wanaagsan oo ku saabsan goleyaasha kala duwan. Adeeggoodu aad buu uga fiicnaa! Waxay leeyihiin koox had iyo jeer gacanta si ay kaaga caawiyaan su'aalaha ama talo. Adeegsiga aaladda Hantidhawrka Link-ka, waan awooday inaan helo dhammaan xiriiriyahayga sunta ah, dhammaantoodna si buuxda ayaan uga saaray. Jason, xubinta kooxda ee aan lahadlay, wuxuu aad ugaacaawiyay taleefoonka. Wuxuu dhagaystay dhibaatooyinkeyga wuxuuna si sax ah u sharaxay waxa qaldan. Markuu sidaa sameeyay wuxuu ii sheegay qalabka sida ugu fiican iigu shaqeyn doona.
Aniga oo adeegsanaya qalabka 'Link Auditors', waxaan helay xog aad u faahfaahsan, waxaan si sax ah u arki karay isku xidhayaasha waxyeellada ii geysanaya waana ogahay xiriiriyeyaasha u baahan in laga saaro. Adeegsiga qalabkooda saaritaanku aad buu u fududaa maadaama ay si buuxda otomaatig u tahay aadna u dhaqso badan tahay. Waxaan adeegsaday aalado kala geddisan oo kala duwan oo laga heli karo internetka, oo kuwooda ayaa ugu fiicnaa!
Nov 28, 2013 at 4: 31 AM
Waxaan adeegsaday Hantidhawrka Link-ka sidoo kale. Waxay wax badan iiga caawiyeen xisaabtankayga, waxay i siinayeen taageero markii aan u baahdo iyo sidoo kale inay ii sharraxaan dhibaatadayda. Waad ku mahadsantahay soo dhajinta tan waxaan u maleynayaa in dad badani ay tahay inay wax ka ogaadaan iyaga. Adeegga ay bixiyaan waa mid fantastik ah, oo la isku halleyn karo oo fudud in la fuliyo.